Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-2022 hacks zokuhamba: Elona xesha lilungileyo lokubhukisha iinqwelomoya kunye neehotele
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-2022 hacks zokuhamba: Elona xesha lililo lokubhukisha inqwelo moya kunye neehotele
Njengokungaqiniseki okunxulunyaniswa nobhubhane oshiyekileyo, ukuguquguquka kuya kuhlala kuyinto ephambili kubahambi basekhaya nakwamanye amazwe.
Olona suku lufanelekileyo lweveki ukubhukisha inqwelomoya yngeCawa, hayi ngolwesiHlanu.
Ngelixa amaxabiso okuhlala emakhaya ehle ngo-2020, amaxabiso enyuka kancinci kunyaka ophelileyo.
Njengokuba abahambi beqhubeka nokucwangcisa uhambo, umzi-mveliso ubonisa olona suku lubalaseleyo lokubhukisha ukuqesha imoto ngolwesine kuhambo lwasekhaya.
Ingxelo entsha etyhila iihacks zohambo zalo nyaka, kubandakanya elona xesha lilungileyo lokubhukisha inqwelo moya, ixesha lokuhamba kunye nezinye iingcebiso zokunceda abahambi babhukishe iholide ngo-2022, ikhutshwe namhlanje.
Emva kweenyanga ezili-18 abahambi bamazwe aphesheya beqala ukuvela kwakhona, bakulungele ukuphonononga umhlaba kwaye amava atshintsha ubomi angabuya kwakhona. Ngokwengxelo, omnye kwabahambi abane ufuna iingcebiso zokonga kunye neepesenti ezingama-45 ezibonisa ukuba bazimisele ukuba bhetyebhetye kwizicwangciso zabo zokuhamba ukugcina imali.
Iinqwelo-moya zokubhukisha ii-2022
Ngokusekwe kwidatha evela ARC, amaxabiso aphakathi etikiti (ii-ATPs) ebutsheni bowe-2021 ayesephezulu kuneminyaka edlulileyo; Nangona kunjalo, ngo-Epreli kuye kwakho ukuncipha. Ii-ATPs zeenqwelomoya zamazwe aphesheya nezasekhaya ziye zanda ngokuthe chu kodwa zisephakathi ngeepesenti ezingama-25 ezisezantsi xa kuthelekiswa no-2019.
Ifowuni efanelekileyo yokubhuka
Amaxabiso eenqwelomoya zasekhaya aqala ngokunyuka kwiintsuku ezingama-35 ngaphambi kokumka, ngelixa amaxabiso eenqwelo moya aphesheya aqala ukunyuka kwiintsuku ezingama-28 ngaphambili. Indawo emnandi yokubhukisha uhambo lwasekhaya iphakathi kweentsuku ezingama-28 ukuya kuma-49 ngaphambi kwexesha, ngelixa iinqwelomoya kufuneka zibhukishe iinyanga ezintathu ukuya kwezine ngaphambi kwexabiso eliphantsi.
Usuku olufanelekileyo lweveki ukubhukisha
Olona suku lufanelekileyo lokubhukisha indiza ngeCawa, hayi ngolwesiHlanu. Ukuhamba ngenqwelomoya ekhaya kungasindisa abahambi ngepesenti ye-15 kunye nakwinqwelomoya eyonga ilizwe lonke malunga neepesenti ezili-10.
Usuku olufanelekileyo lweveki lokuhamba
Owona mhla wokuqalisa uhambo lwasekhaya ngolwe-Sihlanu hayi ngoMvulo, apho abahambi banokugcina malunga neepesenti ezingama-25.
Kwiinqwelomoya, qala uhambo ngoMgqibelo, hayi ngolwesiBini ukugcina phantse iipesenti ezili-10.
Eyona nyanga yokuhamba
Abahambi abacwangcisa iihambo zabo ezingama-2022 banokuvula nokonga okukhulu ngokuba bhetyebhetye kwaye bakhethe inyanga efanelekileyo yokuhamba:
Inyanga efanelekileyo yokuhamba nguJanuwari xa kuthelekiswa noDisemba. Ukuhamba ngenqwelomoya ekhaya kungasindisa abahambi ngeepesenti ezili-15 kwaye phantse kube ngama-30 eepesenti kuhambo lwamazwe aphesheya.